Shiinaha Ku dayashada marmar YC102 soosaarayaasha iyo alaableyda | Yingjiwei
Ku dayasho marmar YC102
Noocyada aluminium ee guddi farshaxan dalool leh
1. Si fudud loo farsameeyo loona feero noocyo kala duwan oo qaabab ah
3. Muuqaal qurux badan
4. dhumuc iyo cabbir kala duwan
5. Si fiican u dhuuqida codka
6. Fursado badan oo furitaan ah8. Miisaanka fudud
7. Cimri dheer
8. Deegaanka u habboon, ayaa dib loo isticmaali karaa 100%.
Aluminium jilitaanka aluminium iyo dhagaxa dhagxaanta ayaa ah nooc ka mid ah saameynta qurxinta, taas oo la mid ah marmar, granite iyo dhagax.
Darbiga saamaynta marmarka jilitaanku wuxuu soo bandhigayaa nooc daruur u eg saamayn leh tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah, midab qoto dheer iyo dareen qurux badan Saamaynta noocan ah waxaa loo isticmaali karaa dusha sare ee gidaarka ama wajiga hore ee dhismaha. Maaddaama dahaadhku gaarayo dhumuc cayiman, wuxuu kaloo ilaalin karaa derbiga dhismooyinka.
Ku dayashada saamaynta marmar dabiiciga ah, oo ku habboon tiirarka, miisaska, derbiyada iyo dusha kale.
Faa'iidooyinka aluminium ku dayashada guddi marble ah:
1. Waxay ku habboon tahay noocyo kala duwan oo dusha qaabaysan oo gaar ah, sida tiirka Roomaanka, gudaha iyo dibedda jaranjarooyinka wareegaya iyo meelaha kale ee isku dhafan ee qaababka gaarka ah leh;
2. Dhammaantood waxaa lagu sameeyaa habka dahaadhka adag, markaa way ka fududdahay dhagaxa miisaanka culus, culeyskiisu wuxuu ka yar yahay toban meelood meel dhagaxa dabiiciga ah;
3. Waa ku dayasho macmal ah, laakiin tiknoolajiyada ku dayashada fiican ayaa ka dhigi doonta badeecada la dhammeeyay dabiicad marmar dabiici ah, midab, qurux iyo deeqsi.
4. qalafsanaan sare iyo xoog.
Magaca badeecada Qalabka aluminium ee aluminium iyo dhagxaan dhagax ah
Shayga No. YC102
Daaweynta dusha sare Dahaarka PVDF / Dahaarka budada
Midab ku dayasho marmar iyo dhagax
Codsiyada Ku habboon meelaha kala duwan ee nolosha iyo shaqada, dogobyada iyo tiirarka, balakoonnada, wiishka, miisaska, hudheelka, isbitaalka, villa, saldhigga, garoonka diyaaradaha, jimicsiga, suuqa laga dukaameysto iyo hoolka operaexhibition iyo dhismaha ganacsiga.
Hore: Guddi hadhuudh alwaax YC204
Xiga: UV daabacaadda guddiga YA503